Alakamisy masina 01/04/2021
Salama Mampandre antsika fa hisy ny fankalazana ny alakamisy masina rahampitso amin'ny 8 ora alina. Fotoam-pivavahana hatao en ligne hiarahana amin'ny fitandremana izany. Tahin'i Jesosy Rohy : http://3bbl.org/index.html?link=QGh0dHBzOi8vbWVldC9maXRhbmRyZW3EkWFtb27Eg2VsbGllcjtfX0BhdXRob3LEpDrEo8SldMSPbGXErUFMQUtBTUlTWSBNQVNJTkHEr0BkxLHEicStxYZmxJRxxK3ElXB0eQ==
Miarahaba antsika rehetra. - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 28/03 ho avy izao dia ho tanterahana ao amin’ny Chapelle Eglise Saint Jacques. Fidirana amin’ny 11 ora. Hisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. - SALOMA : Hisy ny fampianarana ny sekoly alahady hanomboka amin’ny 10 ora - FIFIL : Hisy ny fotoam-pifohazana ny Sabotsy hariva amin’ny 20h tanterahana ao amin’ny Skype « FLMMontpellier » izay hanasana ny fiangonana rehetra. - KTLM : Hisy ny fampianaran-kira amin’ny 10:15, mialoha ny culte. Ny Tompo anie hitahy antsika.
Miarahaba antsika rehetra. - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 21/03 ho avy izao dia ho tanterahana ao amin’ny Chapelle Eglise Saint Jacques. Fidirana amin’ny 11 ora. - SALOMA : Hisy ny fampianarana ny sekoly alahady hanomboka amin’ny 10 ora - FIFIL : Hisy ny fotoam-pifohazana ny Sabotsy hariva amin’ny 20h tanterahana ao amin’ny Skype « FLMMontpellier » izay hanasana ny fiangonana rehetra. - KTLM : Hisy ny fampianaran-kira amin’ny 10h15, mialoha ny culte. Ny Tompo anie hitahy antsika.
Miarahaba antsika rehetra. - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 15/03 ho avy izao dia ho tanterahana ao amin’ny Chapelle Eglise Saint Jacques. Fidirana amin’ny 11 ora. Hisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. - SALOMA : Hisy ny fampianarana ny sekoly alahady hanomboka amin’ny 10 ora. - KTLM : répétition alohan'ny culte amin'ny 10 ora 15 min. - FIFIL : Hisy ny fotoam-pifohazana ny Sabotsy hariva amin’ny 20h tanterahana ao amin’ny Skype « FLMMontpellier » izay hanasana ny fiangonana rehetra. Ny Tompo anie hitahy antsika.